BBC Somali - Warar - Uganda oo dadkeedu saddex laabmayaan
Uganda oo dadkeedu saddex laabmayaan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Oktoobar, 2012, 16:28 GMT 19:28 SGA
Hooyooyinka Uganda waxay dhalaan carruur tira badan
Iyadoo ay Uganda u dabaaldegeyso 50 guuradii ka soo wareegatay markii ay xornimada ka qaadatay gumeysigii Britain, ayaa waxaa la filayaa in 50-ka sano ee soo aadan tirada dadka Uganda ay saddex laabmaan.
Astaanta ugu weyn ee muujinaysa in tirada dadka ay si xowli ah u kordhaysa waa sida is daba joogta ee ay haweenku u dhalayaan dalka Uganda.
Xarunta Kawempe Health Center ee ku taal waqooyiga caasimada Uganda ee Kampala, waxaa shaqada isku badbadalo umulisooyin, Labada umuliso ee hadda shaqada ku jira ee ka howlgala halkan aad ayeey u daaleen.
Waxaa ku yaal xarunta laba qol oo lagu sameeyo baaritaanada, waxay u muuqdaan kuwo gaboobay iyadoo darbiyada qololkana ay u baahan yihiin in la mariyo riinji.
Labada qolba waxaa yaal sariiro iyo qalab caafimaad, waxayna u baahan yihiin in la dayac tiro.
Sarah Kintu, waa madaxa qeybta dhalmada ee xarunta, waxay BBC-da u sheegtay "Mararka qaar waxaad caawinaysaa hooyo, laba kale ama saddex ayaa bilaabaya inay soo furmaan, waxay u baahan tahay inaad digtoonaato."
"Mararka qaar 10 daqiiqo unbaa u dhaxeyso markii ay dhalaan haweenka."
"Waxaad meesha ka saaraysaa hooyo oo waxaad nadiifinaysaa goobta, ka dib waa inaad hooyo kale soo galisaa."
Naigaga Sainah, waa hooyo ku dhashay isbatalkan 5 jeer, waxay ugu muuqataa in ay tahay arrin caadi ah in halkan ay ku dhasho.
Waxay timid xaruntan caafimaad subaxdii iyadoo ay nabaro qabanayaan, waxayna dhashay galabtii, habeenkiina guriga ayaaba loo qaaday.
Ma aanay jirin oohin iyo qeylo, waxooga way xanuunsanaysay oo shey caloosha looga riixayay ayaa dhibayay mana aysan hadlayn.
Waa arrin dalka oo dhan ka jirta.
Musveni waxaa uu u ololeeyaa tirada dadka oo badato
Kobaca tirada dadka
Uganda waa mid ka mid ah wadamada ay sida degdega ah ay u kobcayaan dadkooda, oo sanadkiiba waxay korortaa ku dhawaad boqolkiiba 3.
Celcelis haweenka halkan tiiba waxay haysataa lix caruur ah.
Waxaa la qiyaasayaa in sanada 2060-ka Uganda dadkeeda uu ka sara maro 35-ta milyan ee ay iminka yihiin uuna gaaro in ka badan 112 milyan.
Balse waxay Uganda-eeska la yaaban yihiin sida ay ugu suurta galayso inuu dhulkooda uu ku filnaado dadkaa tirada badan.
Marwo Sainah, waxay ka warwarsan tahay sida ay uga taxadarayso qoyskeeda.
Gurigeeda waxa uu ku yaal dhowr kiilo-mitir meel u jirto xarunta caafimaad, waa hal qol oo lagu kala xirxiray kartoono, waxay ka sameysteen barsad yar iyo qol jiif ah oo ay wadaagaan iyada, ninkeeda iyo caruurtaba.
Wajigeeda waa uu iftiimayaa, wayna dhoola caddeysaa oo si diiran ayeey u soo dhaweysaa dadka u yimaado inkastoo ay ka muuqato shaqo badan.
Waxay ku mashquulsan tahay in ay u qubeyso caruurta oo ay quraac u kariso, maba qiyaasi kartid in ay iminka un dhashay.
"Iminka ma shaqeeyo balse waxaa shaqeeyo ninkeyga. Marka waxa yarka ah ee aan helno waa waxa aynu caruurteena shanta ah ku korino," ayeey tiri.
"Wixii hadda ka dambeeya waan joojinayaa dhalmada waxaanan qorshe u sameynayaa caruurtan. Markii aan dareemo inaan xaalad fiican ku jiro markaa waan dhali karaa caruur kale - laga yaabo laba ama saddex.
"Ninkeyga iyo anigaba waxaan leenahay qoys weyn haddii aan si fiican wax u baro markii ay koraan way iga taxadari karaan." ayeey hadalkeeda ku soo gabagabeesay.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sidoo kale waxa uu jecel yahay in dad badan oo reer Uganda ay aaminaan sida uu isagu rumeysan yahay ee ah in dadka oo bato ay kobcin karto dhaqaalaha.
Caafimaad iyo waxbarasho
Waxaa uu leeyahay taasi waxa ay dalka u soo saari kartaa dhaqaale balaaran iyo dad badan oo isticmaala dhaqaalaha.
Madaxweynaha oo dalka soo maamulayay 26-kii sano ee ugu dambeesay, ayaanan ka walwalsaneyn in wax loo helo jiilka mustaqbalka.
"Wadanka UK waxaynu nahay isku balac waa sida Uganda oo kale. Dadkeedu waa 60 milyan. Dhamaantoodna waxay ku wada nool yihiin si ay ku qanacsan yihiin," ayuu ku yiri khudbad uu ka jeedinayay 50 guuradii ka soo wareegatay madaxbanaanida Uganda.
"Mana haystaan kheyraadka ay Uganda haysato. Uganda waxay leedahay kheyraad badan oo aanay lahayn wadamada kale ee aan ka hadleynay." ayuu ku daray.
Hase ahaatee xukuumada ayaa waxay u baahan tahay inay u keento bulshada howlo badan sida caafimaad iyo waxbarasho.
Sidoo kale Uganda waxay u baahan doontaa inay xaqiijiso in dhaqaalaheeda uu u sameeyo shaqooyin jiilka soo koraya.
Dadka ka soo horjeedo xukuumada ayaa waxay ku doodayaan in nidaamka caafimaadka uu yahay mid ay la daalaa dhacayso xukuumada, hanaanka waxbarashadana ma soo saaro arday tayo leh iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida quwada korontada oo aan hagaagsanayn iyo wadooyinka oo aan u wanaagsanayn marida.